अध्यादेश फिर्ता लिन ओलीलाई प्रचण्डको २४ घण्टे अल्टिमेटम, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
अध्यादेश फिर्ता लिन ओलीलाई प्रचण्डको २४ घण्टे अल्टिमेटम, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं। २ दिनअघि जारी भएका २ अध्यादेशले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको छ । पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिबाट जारी गराएपछि पार्टी बाहिर मात्रै हैन भित्र पनि त्यसको व्यापक बिरोध भएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैंसीपार्टीस्थित निवासमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठकले शुक्रबारसम्म अध्यादेश फिर्ता नलिए शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरको छ। बिहीबार साँझ भैंसेपाटीमा बसेको बैठकले निर्णय फिर्ता लिन ओलीलाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो।
‘हमीले २४ घण्टाभित्र निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अध्यादेशको निर्णय फिर्ता नलिए शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने छौं।’ ति नेताका अनुसार बैठकमा ओलीले गरेका पछिल्ला कामहरुको बारेमा पनि छलफल भएको थियो। अन्नपूर्ण दैनिकले समाचार लेखेको छ ।
नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्‍त्री ओली, उपप्रधानमन्‍त्री ईश्‍वर पोखरेल र गृहमन्‍त्री रामबहादुर थापा बादलबाहेक अरु ६ नेता भैंसीपाटीमा सहभागी थिए। भैंसीपाटीमा बैठक बस्दै गरेको अवस्थामा प्रधानमन्‍त्री ओली भने राष्ट्रपति विद्‍या भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए। विवादित अध्यादेशका बारेमा परामर्श गर्न ओली शितल निवास गएका हुन्।
बुधबार मात्र नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेर अध्यक्षद्वयलाई पत्र पठाएका थिए। पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्ष नाघ्दा पनि अहिलेसम्म आन्तरिक संरचनाले पूर्णता हुन सकेको छैन्। अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्‍न सकेको छैन भने पोलिटब्यूरो गठन नै भएको छैन्। स्थायी समिति बस्दै स्थगित हुँदै आएको छ।
सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सो अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्‍याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविनै संवैधानिक परिषद बैठक बस्‍न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोमबार साँझ सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दाबस्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।